ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ ရေးသားဖို့ ဘယ်သူက ပံ့ပိုးသလဲ
ABSDF နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ ရေးသားဖို့ ဘယ်သူက ပံ့ပိုးသလဲ
May Thingyan Hein · 7,312 like this
မနေ့တုန်းက မနန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီးပြီးရင် ကျန်တဲ့ ဘက်ကို ဆက်မေးပြီးရေးပါမယ်လို့ ကျမ post တင်ခဲ့တယ်။
အဲလို တင်လိုက်တော့ တယောက်က ကျမကို မေးလာပါတယ်။ ခုလိုမျိုး ရေး ဖို့ ဆိုတာ အချိန်၊ ငွေ၊ အင်အား တွေ ရင်းရတယ်တဲ့... အဲဒီအတွက် ဘယ်သူက ပံ့ပိုးသလဲ...တဲ့။
အဲဒီ မေးခွန်းကို ဒီနေရာကနေ အားလုံး သိအောင် ဖြေပါမယ်။
(၁) ကျမက တနေကုန် ကျမရဲ့ ရွှေမြစ်မခ အတွက် စီအီးအို တာဝန်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ်တာဝန်ကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရင်း သတင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကျမတို့ မြစ်မခ မီဒီယာအနေနဲ့ ပြည်တွင်း ဂျာနယ် ၁၃ စောင်၊ သတင်းစာ တစောင်နဲ့ FM လေဒီယိုတခုအတွက် ပုံမှန်သတင်းတွေ ရောင်းပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျမက VOA တီဗီသတင်း၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းအေဂျင်စီ တခုဖြစ်တဲ့ ဂျာမန် သတင်းအေဂျင်စီ ဖြစ်တဲ့ dpa အတွက်လည်း သတင်းထောက် လုပ်ပေးနေပါတယ်။
ဒီအလုပ်တွေ လုပ်နေရတဲ့ အတွက် ကျမမှာ သီးသန့် အချိန်ရှားလှပါတယ်။
မြောက်ပိုင်း ရဲဘော်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းတာ အခက်အခဲ မရှိပေမဲ့ အသံဖမ်း စက်ကနေ အသံတွေ ပြန်နားထောင်ပြိး ရေးဖို့ကတော့ အချိန်တော်တော် ယူရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ညပိုင်း အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ ကျမရဲ့ အိပ်ချိန်ထဲကနေ ဖဲ့ပြီး စာရေးပါတယ်။
တခါတလေ တညလုံးတောင် မအိပ်ဘဲနဲ့ ရေးခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မြစ်မခကို ထူထောင်တာ ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ၀င်ငွေနဲ့ပါ၊ မိသားစုပိုင် ငွေနဲ့ ကျမ ထူထောင်ပါတယ်။
ခုလည်း ABSDF ရဲဘော်တွေအကြောင်း ရေးသားနေတာ ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ငွေကိုပဲ သုံးစွဲပါတယ်။ နောင်လည်း ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ၊ မိသားစုငွေကိုပဲ ဆက်သုံးစွဲရဦးမှာပါပဲ။
အခြား သတင်းတွေ လုပ်တာက ကျမအတွက် စာမူခ ငွေရပါတယ်။ ABSDF သတင်းကတော့ ဘယ်သတင်း ဋ္ဌာနကမှလည်း ဒီသတင်းကို ၀ယ်မသုံးကြပါဘူး။ ပြည်တွင်း ဂျာနယ် တစောင်က အခန်းဆက်အနေနဲ့ ၀ယ်သုံးပါတယ်။ တပုဒ်ကို ငွေကျပ် ၅ ထောင်နဲ့ပါ။ အဲတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဒီအကြောင်းရေးတဲ့အတွက် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိစ္စကို ကျမ ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ငွေကြေးအကျိုါ်အမြတ် ကိစ္စထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်လို့ ပါပဲ။
(၃) အင်အား ...
ပိုက်ဆံ မရှိ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း မရှိ( သာမန်ပြည်သူ တယောက်သာဖြစ်ပြီး အာဏာရှိသော အသိုင်းအ၀ိုင်းက မဟုတ်သလို၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း မဟုတ်၊ ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း မဟုတ်ခြင်းကို ရည်၇ွယ်ပါတယ်)
ဒီအလုပ်လုပ်တာ ကျမရဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်တခုတည်းနဲ့ လုပ်ဖြစ်တာပါပဲ။
ဒီလိုလုပ်နေရင်း အပြောအဆို ခံရပါတယ်၊ ခြိမ်းခြောက်တာလဲ ခံရပါတယ်၊ အဆဲလည်း ခံရပါတယ်။ ခုချိန်ထိလည်း အဖဲ့ ခံနေရတုန်းပါပဲ။ ကျမ ဆက်မရေး တော့ဘူးလို့ ၂ ရက်လောက်ထိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျလွန်းလွန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ ရပ်မပစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး၊ ခုချိန်ထိ ကျမက ဆုံးသည်ထိ ရေးသွားဖို့ပဲ စိတ်ကူး ထားပါတယ်။
ပြောရရင် ကျမမှာ စိတ်ဓါတ်အင်အားက လွဲပြီး ဘာမှ မရှိပါဘူး။
မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို လေးစားခင်မင်လျက်ပါ။
You, Htay Tint, K Ki Ki, Aung Moe Win and 117 others like this.
December 20, 2012 at 7:11pm · Like · 1
Sai Zaw Linn Htun Fighting Ah Ma. Move on forward. The important thing in job is to satisfy what we are and doing.
December 20, 2012 at 7:12pm via mobile · Like · 2
Ko Nyi Nyi ရေးပါ အစ်မ၊ ဆက်ရေးပါ။ ဆက်ပြီးဆက်ပြီးရေးပါ... အားပေးနေပါတယ်။
December 20, 2012 at 7:13pm · Like · 3
Ramsein Awiqwang ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။ တဖက်သူတွေရဲ့ပြောသံတွေလည်း မျော်နေပါတယ်။
December 20, 2012 at 7:13pm · Like · 2
Zstream Zin We strongly support to u. Don't give up!
December 20, 2012 at 7:17pm via mobile · Like · 1
Sanay Minthar အားတင်းစမ်းပါ---မမေသင်္ကြန်၊ ကျွန်တော်လည်း မီဒီယာတစ်ခုထူထောင်နေပါတယ်။အမနဲ့ ထပ်တူပါဘဲ။ ဘယ်သူပံ့ပိုးလဲပေါ့။ ဘယ်သူမှ မပံ့ပိုးပါဘူး။ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုတွေရှိတယ်။ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ၀န်ထမ်းဆိုရင် ၀န်ထမ်းအလုပ်လုပ် မီဒီယာ၊မီဒီယာအလုပ်လုပ်မယ်။ဒါဘဲ။ မမေ သင်္ကြန် လိုအပ်ရင်ဆက်သွယ်ဖို့ sanayminthar9@gmail.com မွန်ပြည်နယ်သတင်းတွေလိုချင်ရင်၊ ဆက်သွယ်ချင်ရင် ကူညီပေးမယ်။ မီဒီယာလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါစေ။
December 20, 2012 at 7:20pm · Like · 1
KO MG MG လောကဓံဆိုတာ လောကရဲ့ဒဏ်ပါအန်တီလေးရယ်။
December 20, 2012 at 7:24pm via mobile · Like · 1
Wunna Phyoe Carry on
December 20, 2012 at 7:33pm via mobile · Like · 1
Ko Thet Mon အားပေးပါတယ် ဆက်ရေးပါ သမိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်
December 20, 2012 at 8:00pm via mobile · Like · 2
Myo Aung Thant Good.Work, more and more work.go ahead.
December 20, 2012 at 8:04pm · Like · 1
Oo Thar မမေသင်္ကြန်ဟိန်ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေဟာ၊ ကျောင်းသားသမိုင်းကို အမဲဆိုးခဲ့တဲ့ ရဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့  အကြောင်းတွေကို သိခွင့်ရတဲ့အတွက် အများကြီး သမိုင်းတန်ဘိုးရှိပါတယ်၊ ဆက်ရေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်၊
December 20, 2012 at 8:20pm via mobile · Like · 1
Champion Muse လေးစားပါတယ် ။
December 20, 2012 at 8:23pm via mobile · Like · 1
Re Searcher အမှန်တရားကို လူတိုင်းက မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အမ စာရေးတိုင်း လိုက်နှောက်ယှက်တဲ့လူ ပေါ်လာရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေကို လိုက်ပြီး ဖြေရှင်းနေမဲ့အစား အမှန်တရားကို အားလုံး လူတွေမျက်စိရှေ့ရောက်အောင် ချပေးတာက ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျန်းမာပါစေ အမ မေသင်္ကြန်ဟိန်း........
December 20, 2012 at 8:26pm · Like · 1
May Thet အားပေးနေပါတယ်ဆက်ရေးပါ
December 20, 2012 at 8:34pm via mobile · Like · 1
Sandar Win ဆက်ရေးပါ
December 20, 2012 at 8:43pm · Like · 1
KO MG MG အန်တီလေး မြစ်မခလို့နာမည်ပေးရခြင်းရယ်ရွယ်ချက်ကို သိပရစေ။
December 20, 2012 at 8:53pm via mobile · Like · 1
Thein Min Win အားပေးနေပါတယ်..လေးလည်းလေးစားပါတယ်..ဆက်ကြိုးစားပါ..လိုအပ်ရင် အစ်မလောက် မရင်းရဲပေမယ့် ကူညီနိုင်တာ ကူညီပါ့မယ်။
December 20, 2012 at 9:14pm · Like · 1
Thway Thit don't care anybody,you must do your job.
December 20, 2012 at 9:20pm via mobile · Like · 1
Thu Rein ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လုပ်နိုင်သွားနေတဲ့သူတွေရဲ့အနောက်ကနေလေးစားဂုဏ်ယူ စွာနဲ့အားပေးပါတယ်
May Thingyan Hein KO MG MG ရေ မြစ်မခ ဆိုတာ ပဲခူးတိုင်းကနေ ရန်ကုန်တိုင်း ထဲကို စီးဝင်တဲ့ မြစ်တစင်းပါ၊ ကျမ မေမေက မြစ်မခ မြစ်ကို သုတေသနလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ မြစ်ပေါ်မှာ ဆည်၊ တာမံ၊ပေါင်း ၁၀ ခုလောက် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ မြစ်မခ မြစ်ဟာ အရင်တုန်းကလို ရေစီးကြောင်း မကောင်းနိုင်တော့တဲ့အပြင် ရေနေသတ္တ၀ါတွေကိုလည်း ထိခိုက်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီ မြစ်မခ မြစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျမတို့ မိသားစု စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်၊ ဒေသခံတွေအတွက် စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ ကျမ မေမေရဲ့ အားထုတ်မှုကို လေးစားဂုဏ်ယူမိတဲ့ အနေနဲ့ မြစ်မခ လို့ အမည်ယူခဲ့တာပါ၊ မြစ်မခ မြစ်ဟာ ဖုတ်လှို့်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ အသက်ရှင်နေရတဲ့ မြစ်တစင်းပါ။
December 20, 2012 at 9:32pm · Like · 3
KO MG MG ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီလေး ခုလိုသိရတာ ။ နာမည်ပေးရခြင်းအကြောင်းအရာဇစ်မြစ်ကို သိရတာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
December 20, 2012 at 9:56pm via mobile · Like
Soe Lay သတင်းမှန်တွေပျောက်ပြီးကောလဟလတွေလွှမ်းမိုးခဲ့လို့တိုင်းပြည်မှာကြေ
December 20, 2012 at 10:03pm · Like
Kyaw Aung We support you..don't stop your step.
December 20, 2012 at 10:36pm via mobile · Like · 1
Nay Myo Min ဒီသတင်းတွေကတော်ရုံသိဖို့ မလွယ်ပါဘူး အဖြစ်မှန်တွေကို မှတ်တန်းအဖြစ် ရှိနေစေမှာပါ ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်။
December 20, 2012 at 11:13pm via mobile · Like
Ko Zayar မနန်းအောင်ထွေးကြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းခရီးနဲ့ အေဘီဆောင်းပါးတွေကို လုံးချင်းစာအုပ်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်မှာသေချာပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေက အားပေးကြမှာပါ။ facebook မသုံးတဲ့ ပြည်သူတွေကြားမှာ ဒီဆောင်းပါးတွေကို ရောက်စေချင်ပါတယ်။
December 21, 2012 at 2:57am · Like
Nang Myint Nang Myint Keep Moving, dnt give up.
December 21, 2012 at 6:45pm · Like
Mg Thet Zaw ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ထားရှင် မို့လေးစား မိပါတယ်
December 22, 2012 at 3:20pm · Like · 1
Laykyaw Zaw အားပေးပါတယ် ..စောင်.ဖတ်နေကြပါတယ်......ဆက်လုပ်ပါ.....
December 27, 2012 at 5:56am · Like
Aung Kn အားပေးနေပါတယ်
January3at 6:31am via mobile · Like